मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अन्तिम चरणमा « रिपोर्टर्स नेपाल
मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अन्तिम चरणमा
नेपाललाई मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय गठन भएपछि आत्मनिर्भरको योजना अघि सारिएको थियो । के हुँदैछ त आत्मनिर्भरको योजना ? पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएका समग्र कामको बारेमा मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीसँग ऋषि धमलाले नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि कुराकानी गर्नुभएको छ । उक्त अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले केके काम गरिरहेको छ ?
यो मन्त्रात्रलयले मानिसको लागि आवश्यक पर्ने दुध, अण्डा र मासुसँग सम्बिन्धत काम गर्ने गर्दछ । कामका लागि माथिल्लो तहमा बजेटका लागि पैरवी गर्छ । हामी मातहतका विभाग र जिल्लास्तरका कार्यालयको काम हामी हेर्छौँ ।
नेपाली बजारमा पाइने दुधको गुणस्तर कस्तो छ ?
दूधको गुणस्तर ठाउँअनुसार फरक हुन सक्छ । तर स्वास्थ्यका हिसाबले गुणस्तरीय र सहि मात्रामा दुध सेवन गराउने हाम्रो उद्देश्य हो ।
तर बजारमा गुणस्तरीय दूध पाइदैन । बेलाबेलामा घटना र अवस्था पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
हामीलाई जानकारी भएसम्म गुणस्तरहिन वा खान नहुने किसिमका दूध विक्रि भएको थाहा पाएमा कारबाही गछौँ । विशेषगरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र हाम्रो निकायबिचको समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ । सबै नागरिकले स्वस्थ दूध खाइरहेका छन् भन्ने हाम्रो बुझाई छ । अहिले चाँही हामी सबै नागरिकलाई मात्रात्मक हिसाबले दूध उपलब्ध गराउने काममा ध्यान दिएका छौँ ।
दूध उत्पादन पनि पर्याप्त छैन । भारतबाट दूध आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
दूध कम उत्पादन हुने सिजनमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय स्थापना भएपछि हामीले दूधमा आत्मनिर्भर हुने योजना ल्याएका छौँ । यो देशमा लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गर्ने मान्त्रालय यही हो ।
अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको हो ?
तथ्याङ्कका आधारमा हिसाब गर्दा वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने अण्डा उत्पादनको लक्ष्य पूरा भएको छ ।
मासुको अवस्था के छ ?
मासु प्रतिव्यक्ति वार्षिक २ किलो अपुग छ । यो वर्षमा त्यो पनि पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।
मात्रा त पुग्ला । तर राजधानीमा मासु व्यवसायको अस्तव्यस्त अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
मन्त्रालयको उद्देश्य पनि स्वस्थ मासु उत्पादन र विक्रि नै हो । अहिले गोठदेखि ओठसम्म स्वस्थ पशुवस्तु पु¥याउने कुरा गरेका छौँ । पछिल्लो समय सुधार पनि भएको छ । मिट मार्टको कुरा पनि उठाएका छौँ । स्थानीय तहसँग मिलेर पनि पशु बधशाला बनाउने योजना ल्याएका छौँ । पशुकल्याणको योजना पनि ल्याउँदै छौँ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो पार्टीलाई पराजित
भारत भ्रमणको क्रममा हाम्रो मोदीसँग भेट हुँदैन् : उदयशमशेर राणा (भिडिओसहित)
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री उदयशमशेर राणाले आफूहरुले भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेका छन् ।